Stuttgart: Gudomiye Cabdirashiid Shariif oo ka Qayb Galay Kulan Caho ah – Rasaasa News
Stuttgart, November 23, 2011 [ras] – Gudomiye ku xigeenka ururka nabada qaatay ee ONLF Abdirashiid Shriif Ali, ayaa la kulmay wasiirka gabalka Badenwürtenberg Herr.Winfrid Kreschman iyo gabadha madaxwaynaha ka ah barlamanka gabalka Frau Löch Birigite, kulanka ayaa ka dhacay xarunta barlamanka [Landstagbadaenwürtenberg] 19/11/11.
Gudoomiye xigeenku wuxuu martiqaad ka helay madaxda gabalka [Stateka]
martiqaadkaas oo ahaa casho sharaf uu sameeyay Ministerpresdentiga Statetka Badaenwürtenberg oo ay magaalo madax u tahay Stuttgart.
Mr Abadi rashiid waxuu fursad u helay in ay isbartaan madaxda gabalka oo uu ugu horeeyo madaxwaynaha iyo gabadha xukunta barlamaka gabalka oo ahayd gabadhii suura galisay in uu Abdirashiid ka soo qayb galo xafladaas
Guddoomiye ku xigeenka oo ka faa,iidaysanaya kulanka ayaa fursad u helay in uu la sheekaysto madaxda gabalka. Waxaa ka mid ahaa arimihi ay ka sheekaysteen heshiiskii nabadeed ay Ethiopia la galeen sanakii tagay iyo isbadalka horumarinta ee ka socota degaanka Somalida Ethiopia.
Gudoomiyaha ayaa ka codsaday madaxda uu la kulmay in ay ka dhaadhiciyaan dawlada Jarmalka in ay gacan ka gaysato horumarinta Degaanka Somalida Ethiopia.
Gudoomiyaha ayaa sheegay in dalka Ethiopia guud ahaan uu ka jiro horumar balaadhan oo dhinac walba ah.
Gudoomiye Cabdirashiid ayaa masuuliyiinta Jarmalka ka codsaday in ay booqdaan Ethiopia, gaar ahaana degaanka Somalida Ethiopia.
Waxaa kale oo iyaguna casho sharafta joogay masuuliyiin oo uu ka mid aa baarlamanka guud ee dalka Jarmalka iyo ganacsatada gabalka.